Weerar ka dhacay Jowhar iyo wararkii ugu dambeeyey - Caasimada Online
Home Warar Weerar ka dhacay Jowhar iyo wararkii ugu dambeeyey
Weerar ka dhacay Jowhar iyo wararkii ugu dambeeyey
Jowhar (Caasimada Online) – Magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka HirShabeelle waxaa caawa lagu garaacay hoobiyeyaal, waxaana la xaqiijiyey in illaa shan hoobiye ay ku soo dhaceen gudaha xaafadaha Horseed iyo Hanti-wadaag, sidoo kale magaalada waxaa laga dhex-maqlayaa rasaas goos goos ah.
Labada xaafadood ee Horseed iyo Hanti-wadaag oo caawa hoobiyaha lagu garaacay waxaa aad u degan mas’uuliyiinta dowlad goboleedka HirShabeelle, waxaana si aad ah loo sugaa ammaankooda.
Inkastoo aan weli la xaqiijin in khasaare ka dhashay hoobiyeyaasha lagu garaacay xaafadahaas ka tirsan Jowhar, hadana cabsi xoog leh ayaa soo wajahday dadka ku nool magaalada, waxaana la aaminsan yahay in Al-Shabaab ay duleedka magaalada ka soo ridayaan hoobiyayaasha.
Weerar loo adeegsaday bamboo-gacmeed oo xalay ka dhacay xaafadda Hanti-wadaag oo ka mid ah xaafadaha caawa la duqeeyey ayaa waxaa ku dhaawacmay seddax xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka HirShabeelle, kadib markii bamkaas lagu tuuray guri ay ku sugnaayeen.
Weerarradaan waxay ku soo aadayaan xilli u diyaar garow doorasho xoog leh uu ka jiro Jowhar, sidoo kale qoraal ka soo baxay guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee HirShabeelle ayaa madaxweyne Cali Guudlaawe looga codsaday inuu deg deg u soo gudbiyo liiska musharaxiinta Aqalka Sare ka soo gelaya HirShabeelle.
Hoos ka akhriso codsiga guddiga